सफल जीवनको लागि प्लेटोका वाणीहरु « Pariwartan Khabar
सफल जीवनको लागि प्लेटोका वाणीहरु
10 January, 2018 8:15 am
९. कैयौँ मानिस आफ्नो जीवन र कामप्रति असन्तुष्टि हुन्छन् । कतिपय त आत्महत्या गर्नसमेत पछि पर्दैनन् । तर, प्लेटो भने जीवनलाई सुन्दर तरिकाले जिउन सुझाब दिन्छन् । भन्छन्, ‘जीवनलाई खेलजसरी जिउनुपर्छ, खेल खेल्दाजस्तै रमाइलो गरी ।’ यसो गर्दा मानिस सफल हुनका लागि प्रेरणा मिल्छ ।
१०. हामीले आफ्नो कुरालाई प्रमाणित गर्नका लागि कतिसम्म एउटै कुरा दोहोर्‍याउन सक्छौँ ? कहिलेकाहीँ त सही कुरा पनि कसैको बहकाउमा बोल्न सक्दैनौँ । तर, सुकरात भन्छन् कि राम्रो कुरालाई दोहोर्‍याउनका लागि कुनै झन्झट मान्नु हुँदैन ।
११. अरू दार्शनिक या महान् व्यक्तिले जस्तै प्लेटोले पनि आत्मविश्वासलाई ठूलो शक्तिका रूपमा वर्णन गरेका छन् । सफल मानिसमा आत्मविश्वासको ठूलो भूमिका रहने उनको भनाइ छ । भनेका छन्, ‘यदि विश्वासका साथ लडेमा हाम्रो शक्ति दुई गुणाले बढ्छ ।’
१२. प्लेटोले भनेका छन्, ‘महान् बन्न चाहेमा स्वयं आफ्नो कामप्रति प्रेम गर्नुपर्दछ । जुन उचित लाग्छ त्यही काम गर्नुपर्छ, न कि अरूले भनेको काम गर्नुपर्छ ।’ उनले यो पनि भनेका छन् कि एक व्यक्ति एकैसाथ थुप्रै काममा सफल हुन सक्दैन ।